Auphonic: Gonesa Podcast yako Audio Neimwe-Dzvanya | Martech Zone
Auphonic: Gonesa Podcast yako Audio Neimwe-Dzvanya
NeChishanu, Kurume 17, 2017 Muvhuro, September 4, 2017 Douglas Karr
Patakavaka yedu Nharaunda yeMartech, taiziva kuti zvingave zvakakosha kune yedu yakakura network yevaverengi kugadzirisa uye kugovana ruzivo rwavaizowana. Pandakanyora nezve podcast odhiyo, Temitayo Osinubi akagovana chishandiso chinodaidzwa chinonzi Auphonic. Kunze kwekunge iwe uri mainjiniya ane ruzha, kugadzirisa kurira kwepodcast yako kunogona kunge kuri basa rinotyisa. Uye zvishandiso zvekurekodha senge Bhandi regaraji usape zvakanyanya munzira yekushandisa maturusi - iwe unofanirwa kungoziva izvo zviri kugona.
Temitayo yakandinongedza munzira Auphonic, webhu-based uye desktop based application inogadzirisa zvese hupfumi uye huwandu hwepodcast yako odhiyo. Iyo tekinoroji inogona kutomisikidza imwe chete track uko mumwe mutauri ari pamusoro kupfuura imwe… inoshamisa zvinoshamisa. Ndakapa iyo bvunzo yekumhanya neimwe yedzinorekodhwa uye ini ipapo ipapo ndakabatwa uye ndikatenga zvese zviri zviviri desktop desktop - imwe ye single-track optimization uye imwe yacho kune yakawanda-track optimization.
Chikamu cheparutivi: Temitayo akandibvunzurudza pane yake podcast uye yaive nguva yakanaka - teerera pano.
The Auphonic Leveler ane njere Desktop Batch Audio File processor iyo inoongorora odhiyo yako uye inogadzirisa musiyano wepakati pakati pevatauri, pakati pemimhanzi nekutaura uye pakati pemafaira akawanda odhiyo kuti uwane kurira kwakaringana.
Inosanganisira a Yechokwadi Peak Limiter, zvinangwa zvakajairika Maitiro Ekurira (EBU R128, ATSC A / 85, Podcasts, Nhare, nezvimwewo) uye otomatiki Ruzha uye Kuderedza Hum algorithms.
Iyo Auphonic Leveler iri inowanikwa yeMac OS X 10.6+ (64bit) uyeWindows 7+ (32bit kana 64bit).
Auphonic Multitrack inotora yakawanda yekuisa odhiyo maturu, inoiongorora uye inogadzirisa ivo pachavo pamwe chete nekubatanidzwa uye inogadzira yekupedzisira kusanganisa otomatiki. Kuenzanisa, kusimba renji kumanikidza, gating, ruzha uye hum kudzikisira, crosstalk kubviswa, ducking uye kusefa kunogona kuiswa otomatiki zvinoenderana nekuongororwa kwenzira yega yega. Ruzha kurongedza uye yechokwadi kukwirira kuregedza kunoshandiswa pane iyo kusanganisa kwekupedzisira.
Auphonic Multitrack iri yakavakirwa zvirongwa zvinodzorwa nekutaura uye inowanikwa ye Mac Os X 10.6+ (64bit) uye Windows 7+ (32bit kana 64bit).
Zvimwe zveakanyanya ruzha ekugadzirisa maficha anosanganisira:
Adaptive Leveler: Iyo Adaptive Leveler inoenzanisira ruzha misiyano, ichiita kuti rwiyo rwese ruzha uye zvakanyanya kunyangwe.
High Pass Filter: Iyo Yakakwira Pass Firita inobvisa inokanganisa maficha epasi munzira yese.
Ruzha uye Kuderedza Hum: Ichi chimiro chinobvisa kumashure odhiyo kubva munzira, kunyangwe paine misiyano. Ichi chiitiko zvakare chinobvisa zvachose tambo yemagetsi hum kubva pakunyora.
Crossgate: Pese paunoteedzerwa iwo maodhiyo mumamakrofoni maviri akasiyana, chinhu ichi chinongoshandisa nzira huru. Crossgate inoshandawo kupukuta zvachose maungira eerekisi.
Ndanga ndichishandisa zvese zvinoshandiswa zvakanyanya uye zvinofanirwa kucherechedzwa kuti havaite zvishamiso. Ini ndaive neruzha rwakakwira mune imwe yangu podcast uye, zvinosuwisa, yakawedzeredzwa isina kuderedzwa mushure mekunge ndamhanya nayo. Nekudaro, ini ndinonyatsoda iyi seti yemidziyo uye ndakave nemhedzisiro mhedzisiro nayo kusvika parizvino! Kutenda Temitayo!
Tags: Adaptive LevelerKugadziridza odhiyoauphonicauphonic levelerauphonic multitrack processorCrossgateYakakwira Pass Firitaitunes pamweroitunes chishandisomultitrackRuzha uye Kuderedza HumPodcast zvishandisotemitayotemitayo osinubivhoriyamu chishandiso
Ini ndinotenda B2B Yemagariro Media Kushambadzira Kubudirira kuri Kuwedzeredzwa
Maitiro Ekunyora Rudzi rwekutanga rweMhanzi neWebhu